Jornaya rụọ ọrụ: Nleba Anya na Ahịa na Ahụhụ Maka Azụ Ahịa-Ndụ | Martech Zone
Jornaya na-bụ data-dị ka-a-ọrụ ụlọ ọrụ na-ele ihe karịrị 350 nde ndị na-azụ ahịa njem kwa ọnwa na-arụ ọrụ n'ahịa ebe ndị ahịa na-etinye oge dị mkpa nyocha, nyocha, na ịtụle nhọrọ na ịzụrụ isi ndụ (MLP).
Jornaya rụọ ọrụ na-enye naanị nleba anya na ahịa na nghọta nghọta maka omume maka isi-ndu zụta ndị na-ere ahịa na ụgbọ ala, agụmakwụkwọ, mkpuchi, na nnyefe ego.
Ndị na-ere ahịa nwere ike ịnata akara ngosi izizi nke ebumnuche ndị zụrụ ahịa, site na ịmara mgbe ndị ahịa ha na atụmanya ha na-ahịa maka ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ha na-enye ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ha nọ na njem ịzụ ahịa yiri nke ahụ.
Jornaya rụọ ọrụ na-enyere ndị na-ere ahịa aka ịkwalite atụmatụ mkpọsa, melite njikọ aka, ma nyefee ahụmịhe kachasị mma nke ndị ahịa n'ofe njigide ha, nnweta, na mmemme ire ere. Site na ịchọta akara ebumnuche ebumnuche mbụ, ndị ahịa nwere mmekọrịta amamịghe ma dị nchebe nke na-eme ka nnweta, ire ere na njigide.
Etu Jornaya si arụ ọrụ
Jornaya nwere mmekorita nke onwe ya na teknụzụ na-ekpuchi ọtụtụ puku ebe nrụọrụ weebụ na-atụnyere ịzụ ahịa na isi mmalite data omume. Ihe arụ ọrụ ahụ na-anata ma na-eweta data dị mma, na-agbaso kwa ụbọchị yana nghọta banyere ndị ahịa dabere na US 'omume ahịa ahịa.
Mee data rụọ ọrụ na-ejikọ ngwa ngwa n'ime nchịkọta martech dị ugbu a site na Jornaya's Integrations Hub. Nke a na - enye ndị na - ere ahịa ohere ka ha nwee ike nweta data Jornaya kwa ụbọchị n’ime CRM, CDP, ESP, dialer ma ọ bụ usoro igbu ọchụ ha chọrọ. Mee ka integrates tinyekwuo na 100 CRM na nyiwe azụmaahịa gụnyere Salesforce, Eloqua, Marketo, HubSpot, na Velocify.
Otu esi arụ ọrụ na-eduga n'inwe ihe ịga nke ọma
Jornaya rụọ ọrụ na-enyere ndị ahịa aka ịghọta ebe ndị ahịa ha na atụmanya ha nọ na njem ha na-azụ ka ha wee nwee ike mezie ọrụ kachasị mkpa ma nye nnukwu ahụmịhe ndị ahịa. Jornaya's Customs Success and Support Team dị na onye ahịa ọ bụla. Site na ịbanye na njikọta iji nyocha maka omume na atụmatụ kacha mma, Jornaya nọ ebe ahụ iji nyere aka mee ka ịga nke ọma na-aga n'ihu.
Gụkwuo Banyere Jornaya rụọ ọrụ
Olee otu Jornaya si echebe ndi ahia nzuzo
Izu nzuzo ndị ahịa bụ ihe kachasị mkpa na Jornaya. Mee ọ rụọ ọrụ na-achịkọta omume na-enweghị aha, na-enweta nghọta, ma nyefee ha na nchịkọta data dị mfe ma dị ike. Jornaya's rụọ ọrụ azịza anaghị emetụta ozi ndị ahịa ọ bụla. Enweghị ozi njirimara onwe (PII) dị, echekwara, ma ọ bụ nkekọrịta. Usoro Jornaya naanị ndekọ ndị na-enweghị ike ịmata.
Tags: njem ndị ahịajornayaJornaya rụọ ọrụisi-ndu zụtamlp